अमेरिका | मझेरी डट कम
kbs — Wed, 07/09/2008 - 15:24
अवतरणको क्रममा विमानले काठमाडा“ै उपत्यकावरिपरि फन्को मार्दा मैले विमानबाटै र्ससर्ती काठमाडा“ैलाई हर्ेर्ने अवसर पाए । अमेरिकाबाट हिड्दा मलाई लागेको थियो, म कुनै असभ्य र आदिमानवहरूको बस्तीमा जादैछु । माटाका घरहरू होलान्, धूलो उड्ने सडकहरू होलान् । यस्तै सोचेको थिए मैले । वास्तवमा नेपालको कुनै सुकिलो छवि थिएन मेरो मस्तिष्कमा । यद्यपि वासिङ्टनमा मैले नेपालसम्बन्धी एउटा वृत्तचित्र हेरेको थिए । तर, त्यो हिमाल आरोहणसम्बन्धी वृत्तचित्र थियो । केही वर्षघि हनी हन्टर पनि हेरेको थिए । ओस्कारमा 'नोमिनेट' भएपछि क्याराभान पनि हेरेको थिए । र, ती सबै हेरेपछि मैले नेपाललाई यसरी नै बुझेको थिए- असभ्य, आदिम, अशिक्षित, गरिब र भोको । हरेक समय अनुदान पर्खिरहेको एउटा निर्धन देश ।
एयरपोर्टको लाउन्जमा मेरो नामको प्लेकार्ड लिएर एउटा दुब्लो-पातलो मान्छे उभिएको थियो । तर, उसको हातमा फूल थिएन, बुके थिएन । असभ्यतासितको पहिलो भेट एयरपोर्टमै भयो ।
'नमस्ते' त्यस मान्छेले भ्ान्यो । मैले बुझिन । उसले सायद मेरो अनुहारको भाव बुझ्यो ।
त्यसैले आफूलाई सच्याएर भन्यो, "हेलो सर, हाउ आर यू -"
त्यसपछि भने मलाई ऊ केही आत्मीय लाग्यो । अङ्ग्रेजी सुनेपछि बिरानो पनि आफन्तजस्तै लाग्दोरहेछ ।
यद्यपि त्यो मान्छे असभ्यजस्तो त देखिएको थिएन । तर, त्यसले अनौठो खालको लुगा लगाएको थियो । एकदम अस्वाभाविक, अनौठो र असुविधाजनक पोसाक । पछि थाहा भयोे, त्यो नेपालको राष्ट्रिय पोसाक रहेछ । दौरा-सुरुवाल । अनि त्यसमाथि चुच्चो परेको अनौठो टोपी । पछि मलाई एयरपोर्टमा लिन आउने त्यस मान्छेको नाम पनि थाहा भयो- जनार्दन । जनार्दन नै मेरो दोभाषे रहेछ । 'गाइड' पनि उही नै रहेछ । मलाई पनि सजिलो भयो ।
तर, एयरपोर्टबाट उसले मलाई सोल्टी क्राउन प्लाजा ल्ौजानुपर्ने । सोझै होटल । म लामो विमानयात्राबाट थाकेको पनि थिए“ । म होटल पुगेर पूरा आराम गर्न चाहन्थे“ ।
तर, उसले मलाई चिडियाखाना पो लग्यो ।
"यो कहा ल्याएको -" मैले रिसाएर सोधे ।
"सर, यो चिडियाघर । जू । थरीथरीका जनावर छन् । बोटिङ्को सुविधा पनि छ । हात्तीमा पनि चढ्न सक्नुहुन्छ," उसले गाइडको भाषामा भन्यो ।
"तर, मेरो प्रोग्राम सेड्युलमा त जू घुम्ने लेखेकै छैन ।"
"हो र -" उसले थाहा नपाएझै भन्यो ।
"यो त तपाईंलाई थाहा हुनुपर्ने मिस्टर जनार्दन ।" मैले केही कठोर भएर भने ।
"सरी सर, आई एम्ा रियल्ली भेरी सरी," उसले याचनामय मुद्रामा भन्यो ।
"यू, बार्स्र्टड," म यसरी हकार्न चाहन्थे“ । तर सोचे“, म त विदेशी । अमेरिकी । अर्काको देशमा छु । यसरी रिसाउनु हु“दैन ।
"सर, म खासमा कन्फ्युज भए ।" ... ऊ रुन लागेझै देखियो । ... र, अनि केहीबेरपछि उसले मलाई होटल पुर्‍यायो । सोल्टी होटल ।
अमेरिकामा मलाई नेपालमा धेरैपटक आइसकेको मेरो एक जना मित्रले भनेको थियो, नेपालमा पानी प्युदा होश पुर्‍याउनू । एकदम फोहर हुन्छ । त्यहाको वातावरणजस्तै । त्यहा“को मानसिकताजस्तै । ... त्यसैले रुम ब्वायलाई मैले तातो पानी ल्याउन भने। 'ब्वायल्ड वाटर' । तर, एकछिनपछि उसले ल्यायो, आइस् क्यूबले भरिएको बाउल । म छक्क परे । मर्ुमरिए । हकारे उसलाई ।
"सरी सर, म खासमा कन्फ्युज भए“," रुम ब्वायले पनि याचनामय भएर जवाफ दियो ।
जाडो थियो । मैले ब्ल्याङ्केट मगाए“ । ऊ एक घण्टा बेपत्ता भयो । र, एक घण्टापछि टेबुल फ्यान लिएर आयो ।
"यो के -" मैले सोधे“ ।
"टेबुल फ्यान- न्यू मोडलको- प|mेस हावा दिन्छ ।"
मैले अनि टाउकोमा हात राखे“ । मलाई लाग्यो, म सा“च्चिकै आदिम ठाउ“मा आइपुगेछु ।
'नेपालमा द्वन्द्वको असर' सम्बन्धमा अध्ययन गर्न म नेपाल आएको थिए“ । ठूलो जिम्मेवारी थियो ममाथि । नेपाली समाजको गहिरो अध्ययन गर्नु थियो । राज्यव्यवस्था र प्रशासनसित सम्बन्धित विशिष्ठ व्यक्तिहरूसित भेटघाट गर्नु थियो । समाजशास्त्रीहरूसित, राजनीतिशास्त्रका प्रोफेसरहरूसित, द्वन्द्व व्यवस्थापनसित सम्बन्धित विज्ञहरूसित भेटघाट गर्नु थियो । 'टाइट सेड्युल' । र, फर्केर ह्वाइटहाउस र पेन्टागनलाई आफ्नो रिपोर्ट पनि बुझाउनु थियो । त्यसैले म हरेक समय चनाखो भइरहनुपर्ने थियो । प्राप्त एकएक सूचनालाई, सुझावलाई र विचारहरूलाई केलाएर तिन्ाीहरूलाई एउटा क्रममा पनि मिलाउनु थियो ।
वास्तवमा दक्षिण एसियामै यो मेरो पहिलो आगमन थियो । यसअघि म इराकमा कार्यरत थिए“ । अमेरिकी आक्रमणअघिको इराकमा । इराकमा भएको सामरिक, जैविक अनि हतियारहरूको अध्ययनको क्रममा मैले केही समय इराकमै बिताएको थिए“ । पेन्टागनलाई त्यससम्बन्धी गोप्य रिपोर्ट बुझाउनेमा म पनि सामेल थिए“ । मलाई खाडी क्षेत्रको विशेषज्ञ मानिन्थ्यो । त्यसैले मैले दक्षिण एसियाको बारेमा उतिसाह्रो अध्ययन गर्न पाएको थिइन । इन्डियाको बारेमा केही जानकारी भने अवश्य थियो । तर, नेपालको बारेमा मलाई यति मात्र थाहा थियो कि यहा“ सगरमाथा छ र गौतम बुद्धको जन्म पनि यही“ भएको थियो । तर, नेपाल आउनुअघि आफूलाई हल्का 'अपडेट' भने गरेको थिए“ र यहा“ चलिरहेको सरकार- माओवादी युद्धको बारेमा मोटामोटी अध्ययन पनि गरेको थिए“ । तर, जिम्मेवारीलाई त बहन गर्नैपर्‍यो । र, यसका निम्ति म तयार पनि थिए“ ।
यहा“का समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, प्रशासक, बुद्धिजीवीहरूको विचार त मैले बुभ्fm्नु नै थियो । तर, मेरा लागि सबैभन्दा महत्त्वपर्ूण्ा थियो, नागरिक समाजको विचार र उनीहरूका अनुभव र उनीहरूका अनुभूतिहरू । यस काममा मलाई मेरो दोभाषे जनार्दनले सहयोग गर्न सक्थ्यो । त्यसैले एक दिन नियमित 'सेड्युल' बाट मैले समय निकाले“ र उसलाई भने“, "मलाई यहा“को समाजको अध्ययन गर्नु छ ।"
अनि उसले अत्यधिक उत्साहित भएर मलाई पुर्‍यायो एउटा सपिङ् कम्लेक्समा । म छक्क परे“ । फेरि हकारे“ उसलाई ।
"के सपिङ् कम्लेक्समा समाजको अध्ययन गर्न सकिन्छ -" हकार्दै भने“ ।
उसले उही पुरानो जवाफ दियो, "सरी सर, म कन्फ्युज भए“ ।"
तर, ठीकै भयो । मैले सोचे“, सपिङ् नै गरिहालु“ । त्यसैले सोझै एउटा पेन्टिङ् पसलमा गए“ ।
"मलाई एउटा सुन्दर पेन्टिङ् देखाऊ," मैले पसलेलाई भने“ । उसले हत्तपत्त मेराअगाडि एउटा पेन्टिङ् तेर्स्यायो । म तर्सर्ेे। किनभने, लाग्थ्यो पेन्टिङ् रङ्गहरूले हैन, रगतले बनाएको हो । लासहरू, विस्फोटहरू, आ“सुहरू । बस् पेन्टिङ्मा त्यति मात्र देखिन्थ्यो । अरू केही थिएन । विरूप । त्यहा“ सुन्दरता थिएन । उत्तरआधुनिक चेतना पनि थिएन ।
"ब्रदर, मैले त सुन्दर पेन्टिङ् खोजेको थिए“," मैले आफूलाई सकेसम्म नम्र बनाएर सोधे“ । पसलेले पनि त्यही भन्यो, जनार्दनले जस्तै ।
"सर, सरी ... कन्फ्युज भए“ ।"
"भाइ, अति भयो । अब म 'रिल्याक्स' चाहन्छु । कृपया मलाई कुनै थिएटरमा लैजाऊ ।" मैले जनार्दनसित याचना नै गरे“ । म शेक्सपियरको कुनै नाटक हेरेर आफ्नो तनाव कम गर्न चाहन्थे“ । रोमियो जुलियट वा अरू त्यस्तै कुनै क्लासिक ।
"अफ्कोर्स, ह्वाइ नट," भन्दै उसले मलाई लग्यो एउटा अनाथालयमा ।
हो अनाथालयमा ।
त्यहा“ अनाथहरू थिए । द्वन्द्वमा आमाबाबु गुमाएर अनाथ भएकाहरू । उनीहरू उदास थिए । अनुहारमा त्रास थियो । पीडा थियो । आ“खामुनि आ“सु सुकेपछिको दाग थियो । सबैको अनुहारमा । त्यहा“ मैले केही फोटो पनि खिचे“ । रोगी, पीडित र अभावग्रस्त अनुहारका पोट्रेटहरू । मेरी छोरी क्रिस्टिनालाई यस्तो फोटो अस्ााध्य मन पर्छ ।
त्यसपछि जनार्दनले मलाई एउटा महिला आश्रममा लग्यो । प्रायः सबै महिलाहरू सेतो साडीमा थिए । तिनीहरूको आ“खामा लाग्थ्यो, कुन्ौ सपना बा“की छैन अब । तिनीहरू पनि द्वन्द्वमा आफ्नो छोरा, आफ्नो लोग्ने र दाजुभाइ गुमाएर एक्लो भएका थिए । तिनीहरूले आफ्नै आ“खाअगाडि आफ्ना दाजुभाइ, सन्तान र पिताहरूको हत्या भएको देखेका थिए । त्यसैले तिनीहरू कसैको अनुहारमा पनि हा“सो भन्ने कुरा थिएन । बस् औ“सीको कुनै भयानक रातको छाया“ पोतिएजस्तो देखिन्थ्यो तिनीहरूको अनुहारमा । यो कहा“ ल्यायो जनार्दनले मलाई । म आराम चाहन्थे“ । उसले तनावग्रस्त ठाउ“मा ल्यायो । तर, त्यहा“ पुगेपछि एउटा कुरा मैले बुझे“ । अनाथ बालकहरू, असहाय भएका महिलाहरूको अनुहारमा हर्ेदा लाग्थ्यो, यिनीहरू केही चाहिरहेछन् । केही खोजिरहेका छन् । जनार्दनको आ“खामा पनि त्यस्तै केही भाव थियो । तर, मैले बुझिन । बुभ्fm्ने समय पनि थिएन । मलाई हतार थियो । यहा“को मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूसित एउटा मिटिङ् थियो ।
मिटिङ्मा मन्त्रीहरू थिए । र, उनीहरू सबै मेरो सुटतिर हर्ेर्दै थिए र मेरो टल्केको जुत्तातिर हर्ेर्दै थिए । मलाई लाग्यो मेरो अमेरिकन जुत्तामा उन्ाीहरू आफ्नो अनुहार हर्ेर्दैछन् । उनीहरू मेरो पहिरन, मेरो घडी, मेरो व्यक्तित्वलाई हर्ेर्दै थिए । मुग्ध भएर । लाटोझै“ ।
"तपाईंहरूको वास्तविक चाहना के -" मैले मन्त्रिमण्डलका वरिष्ठ सदस्यसित सोधे“ ।
"सर, हामीकहा“ रात पर्दा, तपाईंहरूकहा दिन हुन्छ, हो - ... हामीकहा दिन हुदा, तपाईंहरूकहा रात पर्छ, हो - ...वाह, त्यस्तो पो देश ।"
मैले बुझिन“ । यो के थियो - मेरो प्रश्नको उत्तर वा मेरो प्रशंसा वा चिन्तनहीन, विचारहीन दिमागबाट निस्केको एउटा असामयिक र गैरजिम्मेदार टिप्पणी । मैले बुझिन“ ।
पछि जनार्दनले भन्यो, "सर, तिनीहरू कन्फ्युज छन् ।"
मैले जनार्दनसित आफ्ना छोराछोरीका लागि सुन्दर 'गिफ्ट' ल्याउन भने“ । उसले कतैबाट बन्दुक ल्यायो । र, मलाई बन्दुक चलाउने तरिका सिकाउन थाल्यो । म पनि छक्क परे“ । मैले जनार्दनलाई साधारण दोभाषे र गाइड भन्ठानेको थिए“ । तर, उसलाई हतियारहरूको बारेमा गजबको जानकारी रहेछ ।
"सर, यति जानकारी त अचेल यहा“ बच्चा बच्चाले राख्दछ," उसले यति भनेपछि म तीव्र आर्श्चर्यमा परे“ । झन् तनावग्रस्त भए“ । त्यसैले मैले उसलाई फूलको बग“ैचामा लैजाऊ भने“ तर उसले मलाई एम्बुस विस्फोट भएको ठाउ“मा लग्यो । मैले उसलाई देशका प्रतिष्ठित कविहरूसित भेट गराऊ भने“, उसले मलाई विशाल जुलुस देखाउन लग्यो ।
"के यही हो कविहरूको जुलुस - के यिनीहरू नया“ विषय, नया“ विम्ब र नया“ चिन्तनको खोजीमा छन् -" मैले जुलुसतिर हर्ेर्दै जनार्दनलाई सोधे“ ।
"नो सर, यिनीहरू शान्ति चाहियो भन्ने माग लिएर हिडिरहेका जनता हुन् । नेपाली जनता ।"
"ओह, आई सी," मेरो मुखबाट संक्षिप्त प्रतिक्रिया निस्क्यो । मलाई ती जनताको नारा कुनै बोझिल कविताजस्तो लागिरहेको थियो ।
तर, मैले बुझे“ । केही तत्काल बुझे“, केही पछि बुझे“ । बुझे“ कि जनार्दन 'कन्फ्युजन' मा छ । अलमलमा छ । यहा“ सबै अलमलमा छन् । आफूलाई बुझिरहेका छैनन् । आफ्नो चाहनालाई बुझिरहेका छैनन् । आफ्नो सपनालाई बुझिरहेका छैनन् । सिङ्गै देश अलमलमा छ । के ठीक, के बेठीक । के राम्रो, के नराम्रो । के हुनर्ुपर्छ, के हुनु हु“दैन । सबै 'कन्फ्यु्ज्ड' । तर, म खुसी भए । किनभने मैले यहाका जनताको चाहनालाई सजिलै बुझिसकेको थ्ािए । मैले मनमनै आफ्नो विश्लेषण क्षमताको आफ“ैले तारिफ गरे ।
अमेरिका र्फकने बेलामा जनार्दनको आ“खामा आ“सु थियो । मलाई लाग्यो, ऊ मसित केही याचना गर्दैछ र मप्रति एकदमै आशावादी भएको छ । म पनि भावुक भए“ । आखिर अमेरिकी मन न हो । लाग्यो, मैले उसको लागि केही सोच्नर्ैपर्छ । केही गर्नैपर्छ । अनि मैले उसलाई सम्झाए“ ।
"चित्त नदुखाऊ जनार्दन । नरोऊ । मेरो तिमीप्रति सहानुभूति छ । वी आर विद यु । म त्रि्रो साथ छु । सिङ्गो अमेरिका त्रि्रो साथ छ । त्रि्रो दुःख हाम्रो पनि दुःख हो । अमेरिकाको पनि दुःख हो । हामीले तिमीहरूको पीडा बुभ्fm्छौ“ । हामी केही सोच्नेछौ“ तिमीहरूको बारेमा, 'सिरियसली' ।"
प्लेनमा । नेपाली आकाशमा उडिरहेको प्लेनमा मैले आफ्नो अमेरिकन वायरलेस ल्याप्टप खोले । ... र, ह्वाइटहाउसलाई एउटार् इ-मेल पठाए“ ।
"सर, यो ठाउलाई तत्काल केही हतियारहरूको आवश्यकता छ । अत्याधुनिक हतियारहरूको ।"
र, त्यसपछि अर्कोर् इ-मेल जनार्दनलाई पठाए“ ।
"प्रिय जनार्दन, हतियारहरूको एउटा खेप चाडै तिमीहरूकहा पुग्दैछ । वेस्ट अफ लक ।"
त्रिवेणी साहित्यिक परिषदको रजतजयन्ती तथा कृति विमोचन कार्यक्रमको एक झलक
म भक्त हुँ यो देशको
मेरो साधनाको वरदान हो गीत
मन पर्ने मान्छे ले
अामाबाउकाे याद गर
खै के भो के भो आजकल मलाई
दुई मुक्तक (सन्तान, सूचनाको हक)
राजधानीको हाल जताततै कमालै-कमाल
तपाईलाई थाहा छ कि ?
उहिलेका देवीप्रसाद अहिलेका डी.पी.
मनै लोभ्याउने दूधकुण्ड
मृत्युपछिको मीठो सपना
भन तिमी भन्दा म के काम छ
हाल खबर के छ आज भोलि हजुरको
आज २२ औं वसन्त पार गर्दैछु